एकल र बहुविध-पृष्ठ कागजातहरूका लागि पृष्ठ सजावटहरू परिभाषित गर्न तपाईँलाई अनुमति दिन्छ, साथसाथै एउटा क्रमाङकन र कागज ढाँचाहरू ।
ढाँचा - पृष्ठ - पृष्ठ ट्याब रोज्नुहोस
एउटा पृष्ठमा अधिकतम मुद्रणयोग्य क्षेत्र चयन गर्दा
पूर्वपरिभाषित कागज साइजहरूको एउटा सूचीबाट चयन गर्नुहोस् वा एउटा अनुकूल कागज ढाँचा परिभाषित गर्नुहोस्।
एउटा पुर्वपरिभाषित कागज साइज चयन गर्नुहोस् वा उचाइ र चौडाइ बाकसहरूको कागजका लागि आयामहरू प्रविष्टि गरेर एउटा अनुकूल ढाँचा सिर्जना गर्नुहोस्।
चयन गरिएको कागज ढाँचाको चौडाइ प्रदर्शन गर्दछ । एउटा अनुकूल ढाँचा परिभाषित गर्न, यहाँ एउटा चौडाइ प्रविष्ट गर्नुहोस्।
चयन गरिएको कागज ढाँचाको उचाइ प्रदर्शन गर्दछ । एउटा अनुकूल ढाँचा परिभाषित गर्न, यहाँ एउटा उचाइ प्रविष्ट गर्नुहोस्।
ठाडो रूपमा पृष्ठविन्यस्त कागजसँग हालको कागजात प्रदर्शन गर्दछ वा छाप्दछ ।
तेर्सो रूपमा पृष्ठविन्यस्त कागज सँग हालको कागजात प्रदर्शन गर्दछ र छाप्दछ ।
तपाईँको कागजातमा तपाईँले प्रयोग गर्न चाहेको पाठ दिश चयन गर्नुहोस्।"right-to-left (vertical)" पाठ प्रवाह दिशाले हेडर र फुटर बाहेक, सबै सजावट सेटिङहरूलाई दायाँतिर ९० डिग्रीमा घुमाउँदछ ।
तपाईँको मुद्रकका लागि कागज स्रोत चयन गर्नुहोस्। तपाईँले चाहनुहुन्छ भने, तपाईँले भिन्न पृष्ठ शैलीहरूमा एउटा भिन्न ट्रे मानाङ्कन गर्न सक्नुहुन् । उदाहरणका लागि, पहिलो पृष्ठ शैलीमा एउटा भिन्न ट्रे मानाङ्कन गर्नुहोस्र तपाईँको कम्पनीको लेटरहेड कागज सँग ट्रे लोड गर्नुहोस् ।.
हालको चयनको पूर्वावलोकन प्रदर्शन गर्छ.
पृष्ठको किनाराहरू र कागजात पाठको बीचमा छोड्ने खाली स्थानको मात्रा निर्दिष्ट गर्नुहोस्।
बायाँ / भित्री
पृष्ठको बायाँ किनाराहरू र कागजात पाठको बीचमा छोड्ने खाली स्थानको मात्रा प्रविष्ट गर्नुहोस्। यदि तपाईँले मिरर गरिएको पृष्ठ सजावट प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, पृष्ठको भित्री पाठ सीमान्त र भित्री किनाराको बीचमा छोड्ने खाली स्थानको मात्रा प्रविष्ट गर्नुहोस्।
दायाँ / बाहिरी
पृष्ठको दायाँ किनाराहरू र कागजात पाठको बीचमा छोड्ने खाली स्थानको मात्रा प्रविष्ट गर्नुहोस्। यदि तपाईँले मिरर गरिएको पृष्ठ सजावट प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ भने, पृष्ठको बाहिरी पाठ सीमान्त र बाहिरी किनाराको बीचमा छोड्ने खाली स्थानको मात्रा प्रविष्ट गर्नुहोस्।
पृष्ठको माथिल्लो किनारा र कागजात पाठको बीचमा छोड्ने खाली स्थानको मात्रा प्रविष्ट गर्नुहोस्।
पृष्ठको तल्लो किनारा र कागजात पाठको बीचमा छोड्ने खाली स्थानको मात्रा प्रविष्ट गर्नुहोस्।
चयन गरिएको पृष्ठ शैलीमा पाठ माथि रेखाङ्कित गर्नका लागि तपाईले एउटा सन्दर्भको रुपमा प्रयोग गर्न चाहेको अनुच्छेद शैली चयन गर्नुहोस्। सन्दर्भ शैलीमा निर्दिष्ट गरिएको फन्टको उचाइले ठाडो पृष्ठ ग्रिडको खाली स्थान सेट गर्दछ ।
एउटा छापिएको पृष्ठमा कक्षहरूका लागि पङ्क्तिबद्धता विकल्प निर्दिष्ट गर्नुहोस्।
छापिएको पृष्ठमा कक्षहरू तेर्सो रूपमा केन्द्रिकृत गर्दछ ।
छापिएको पृष्ठमा कक्षहरू ठाडो रूपमा केन्द्रिकृत गर्दछ ।
हालको कागजातमा प्रयोग गर्न पृष्ठ सजावट शैली चयन गर्नुहोस्।
हालको पृष्ठ शैली प्रयोग गर्ने बिजोर पृष्ठहरू, जोर पृष्ठहरू, वा दुवै बिजोर र जोर पृष्ठहरूमा ढाँचा लागू गर्ने कि नगर्ने भनेर निर्दिष्ट गर्नुहोस्।
दायाँ र बायाँ
हालको पृष्ठ शैली प्रयोग गर्ने कागजातमा दुवै बिजोर र जोर पृष्ठहरूमा ढाँचा सेटिङहरू लागू गर्दछ ।
यदि तपाईँले मुद्रण गरिएका पृष्टहरू पुस्तकमा जस्तै बाइन्ड गर्न चाहनुहुन्छ भने यो सजावट प्रयोग गर्नुहोस् । दायाँ र बायाँ किनाराहरू पुस्तकको भित्री र बाहिरी किनारा हुन जान्छन् ।
हालको पृष्ठ शैली प्रयोग गर्न विषम पृष्ठहरूमा मात्र हालको ढाँचा सेटिङ लागू गर्दछ । कागजातको पहिलो पृष्ठ एउटा विषम पृष्ठ हो ।
हालको पृष्ठ शैली प्रयोग गर्ने जोर पृष्ठहरूमा मात्र हालको ढाँचा सेटिङहरू लागू गर्दछ ।
हालको पृष्ठ शैलीका लागि तपाईँले प्रयोग गर्न चाहेको पृष्ठ क्रमाङकन ढाँचा चयन गर्नुहोस्।
पृष्ठ ढाँचामा वस्तु स्वत:ठीक पार्नुहोस्
रेखांकन वस्तुहरू पुन: साइज गर्दछ ता कि तपाईँले चयन गरेको कागज ढाँचामा तिनीहरू ठीक हुन् रेखाङ्कन कागजको मिलान संरक्षित गरिएको छ ।